Dị ka Eburu amuma, 2013 Ezumike Ezumike gara Mobile | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 5, 2013 Tọzdee, Disemba 5, 2013 Douglas Karr
Ọ bụghị ihe ijuanya, nyere nkuchi ama, na ekwentị ga-enwe nnukwu mmetụta na ahịa ezumike nke afọ a. Mgbasa mgbasa ozi na-enwekwu mmetụta, mana ọ na-adabaghị ma e jiri ya tụnyere mmetụta mkpanaka. N'ime ahịa ndị mere, 38% nke ntanetị n'ịntanetị sitere na smartphones na mbadamba dịka IBM Digital si kwuo. Emere 21% nke ire ere niile n'ịntanetị site na ngwaọrụ ndị ahụ. Nke ahụ bụ 5.5% karịa 2012!
Na mkpokọta, ụbọchị izu ụka izu ụka gara n'ihu igosi ntanetị na ntanetị na ndị ahịa na-ahọrọ ịnyagharị mbadamba nkume ha na smartphones - showrooming, webrooming and jumping on mobile nyefere azụmahịa. Via Ndị Genes
Ọ bụghị ozi ọma niile n'afọ a. Dabere na NRF, ahịa mbụ dara afọ a yana nkezi ụgbọ ala ịzụ ahịa gbadara 4%.
Tags: 20132013 Fraịde Fraịde2013 ezumike ahịanwa ogemkpụrụ ndụ ihe nketaezumikemobile ahịaịda ụdaọnụ ọgụgụ